JIX Qalabka Dhismaha Ee - Joornaalka Naqshadeynta
Qalabka Dhismaha Ee
Jimco 10 Bisha Lixaad 2022
Qalabka Dhismaha Ee JIX waa xirmo dhisme oo ay abuurtay farshaxan muuqaal ah oo ku saleysan New York iyo naqshadeeyaha wax soo saarka Patrick Martinez. Waxay ka kooban tahay waxyaabo yaryar oo modular ah oo si gaar ah loogu talagalay inay u oggolaadaan in cabbitaannada cabbitaannada caadiga ah lagu xidho, si loo abuuro dhismayaal badan oo ballaaran. Xidhiidhayaasha JIX waxay ku yimaadaan fiilooyin waafi ah oo si fudud u kala go, gala, oo meel ku xidha. Iyada oo la adeegsanayo JIX waxaad ku dhisi kartaa wax walba laga soo bilaabo dhismayaal mug leh oo mug leh ilaa laga qoro shaxanka miiska-sare, dhammaantoodna adeegsanaya isku xirayaasha JIX iyo xirmooyinka cabitaanka.
Magaca mashruuca : JIX, Magaca naqshadeeyayaasha : Patrick Martinez, Magaca macmiilka : Blank Bubble.
Arbaco 8 Bisha Lixaad 2022
Toy, cayaaraha iyo hiwaayadaha soo saarka naqshadaha
Qalabka Dhismaha Ee Patrick Martinez JIX